खानेपानी ल्याउन अाधा घण्टा बढी लाग्छ ? खानेपानी मन्त्रालयमा साेझै फाेन गर्नुस् | mulkhabar.com
खानेपानी ल्याउन अाधा घण्टा बढी लाग्छ ? खानेपानी मन्त्रालयमा साेझै फाेन गर्नुस्
September 11, 2018 | 6:24 am 772 Hits
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले यो विवरण संकलन गर्नुको उद्देश्य खानेपानीको समस्या भोगिरहेका जनतालाई पानीको सुविधा पु¥याउनु नै रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कस्ता कस्ता ठाउँहरुमा खानेपानीको समस्या रहेछ त्यो कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ ।
मन्त्री मगरले खानेपानी लिन विशेष गरी गृहिणी महिलाहरु घण्टौ घण्टा सम्म हिंड्नुपर्ने बाध्यतालाई सुल्झाउन मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको स्पष्ट पारिन् । यसको आधारमा हामी नयाँ योजनाहरु बनाउने उनकाे भनाइ छ ।
एक हप्ता भित्र विवरण पठाउन मन्त्रालयले देशै भरिका घर परिवार, सामाजिक संघ संस्था र स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको छ । खानेपानी संकलन गर्न आधा घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने समुदायका लागि सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले टोल फ्रि नम्बरको समेत व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि १६६००१४२१११ नम्बरमा निशुल्क फोन गर्न सकिने छ । मन्त्री मगरकाे याे कदमले गृहिणी महिलाहरूकाे स्वास्थ्य र प्रगतिमा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ ।